Home समाचार कसले दलितलाई समृद्धि दिन्छ ?
मेरो काका विदेशमा होटेलमा काम गर्थे। त्यहीं सिकेको सीप उपयोग गरी स्वदेश फर्केपछि उनले होटेल व्यवसाय सुरु गरे। सार्की भएकै कारण उनको होटेल चलेन।
– काकाको छोरोले बैंकबाट ऋण काढेर पुख्र्यौली जुत्ता कारखाना चलाएका थिए। त्यो पनि ठूला देशी÷विदेशी जुत्ता उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर घर न घाटको भयो।
– साउदी अरबमा कम्पनीले भने जति तलब नदिएकोले फुपूको छोरो विदेशिएको ४ महिना नै नगुजारी घर फर्किए। साहुसँग चर्को ब्याजमा लिइएको ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न बाँकी नै छ।
– गाउँका एक काका पुरानो प्रविधिको आरनलाई उन्नत बनाउन आवश्यक पुँजीका लागि बैंकलाई गुहार्दैछन्।
– भनसुन गर्ने मान्छे र पैसा नभएकै कारण छिमेकी भाइले एसएलसीमा ८२ प्रतिशत ल्याए पनि डाक्टर बन्ने सपना देख्न सकेनन्, बरु कोरियन भाषा परीषा उत्तीर्ण गरेर विदेशमा ऊर्जा खर्च गर्दै छन्।
अधिकांश दलित परिवारले भोग्दै आएको वास्तविकता झल्काउने प्रतिनिधि घटना हुन् यी। यस्तो कटु वास्तविकता फेर्ने खालका नीति र योजना वाम गठबन्धन सरकारसँग छ ? सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक वृद्धि र विकासको उच्च महत्वाकांक्षी योजनाले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्छन् ? के चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको सामाजिक तथा आर्थिक विकास नीति र राजनीतिक स्थिरताबाट मात्रै दस वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर बनाउन सम्भव छ ? विकासशील र प्रतिव्यक्ति आयको बढोत्तरीले नेपालको विविधतायुक्त समाजमा रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, जातीय र वर्गीय असमानताको खाडल पुर्न सक्छ ?
राज्यले सदियौंदेखि संरचनात्मक रूपमै विभेद गरे पनि पुर्खौंदेखि कुटीर उद्योग र व्यवसाय चलाउँदै आएका उद्यमी, सर्जकको समुदाय दलितका समस्यालाई कसरी हल गरिन्छ ? सीमान्तकृत र बहिस्कृत समुदायका गरिबले परिवर्तनतको अनुभूति गर्ने आर्थिक विकास नीति तथा कार्यक्रम छ कि छैन ? सामाजिक न्याय र समतालाई केन्द्रमा राख्ने विकास र समृद्घि प्राप्त गर्ने सपना छ कि छैन ?
संरचनामै विभेद राजनीतिज्ञ तथा लेखक आहुतिका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहबाट निर्माण भएको जातीय राज्यसत्ताले सबै जात-जातिमाथि शोषण र उत्पीडन गरेको छ। त्यसको प्रभाव दलित, जनजाति, मधेसी र महिलालगायत
सबै समुदायका गरिबको जीवनमा परेको छ। उनीहरू उत्पादनका साधनबाट वञ्चित छन् र आमरूपमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा गरिब छन्। उत्पादनका साधनमा उनीहरूको नहुँदासम्म आर्थिक समृद्घि कोरा कल्पना मात्र हुन्छ। महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार कृषियोग्य जमिन (भूमि) एक महत्वपूर्ण उत्पादनको साधन हो। यो सामाजिक शक्ति, प्रतिष्ठा, गर्व र समग्र समृद्घिको प्रतीक पनि हो।
जमिनलाई सशक्तीकरण, गरिबी निवारण र असल शासनको आधारको रूपमा पनि हेरिन्छ। तर दलित र जमिनबीचको सम्बन्ध पारपाचुकेको अवस्थामा रहेको छ।
यूएनडीपीले सन् २००४ मा सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार १३ प्रतिशत दलितसँग मात्र कुल खेतीयोग्य जमिनको १ प्रतिशत स्वामित्व छ। जमिनसम्बन्धी अनुसन्धाता डा. पूर्ण नेपालीका अनुसार १५.२४ प्रतिशत पहाडी दलित र ४३.९८ प्रतिशत मधेसी दलितसँग जमिन छैन।
समग्र राष्ट्रिय गरिबीको अनुपातभन्दा दलितको गरिबीको अवस्था १६.५ प्रतिशतले बढी छ। यसले विभेदमा पर्दै आएका दलित गरिबीको खाडलमा पनि नराम्ररी भासिएको प्रस्ट देखाउँछ।
थोरै उब्जाउ भूमि भएका दलित तथा सीमान्तकृत घरपरिवारलाई पनि जमिनबाट बढीमा ६ महिनाभन्दा कम मात्र खान पुग्छ। नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०१०÷११ को प्रतिवेदनअनुसार सरदर १०० जना दलितमा ४२ (४२ प्रतिशत) जना गरिब छन्। जबकि नेपालको समग्र गरिबीको अवस्था २५.५ प्रतिशत छ।
अर्थात्, समग्र राष्ट्रिय गरिबीको अनुपातभन्दा दलितको गरिबीको अवस्था १६.५ प्रतिशतले बढी छ। यसले विभेदमा पर्दै आएका दलित गरिबीको खाडलमा पनि नराम्ररी भासिएको प्रस्ट देखाउँछ। राष्ट्रिय समावेशी सर्वेक्षण २०१२ को प्रतिवेदनअनुसार समग्र दलितको साक्षरता दर ५२.४ छ भने मधेसी दलितको साक्षरता दर ३४.४ प्रतिशत मात्रै छ। जबकि देशको साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत छ। यसमा विभेद र गरिबीको नकारात्मक योगदान बढी देखिन्छ। दलितसँगै तमाम सीमान्तकृत र गरिबको शैक्षिक वृद्घि तथा आर्थिक अवस्थामा सुधारको नीति, योजना र प्रयासबिना समृद्धि र विकास दिवास्वप्न हुने छ।
नेपालको मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार मानव विकास सूचकांकमा छेत्री÷बाहुनको अंक ०.५३८ छ। तर दलितको भने ०.४३४ अंक छ। त्यसमा पनि पहाडी दलित र मधेसी दलितको क्रमशः ०.४४३ र ०.४०० अंक छ। सन् २००५ मा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार योग्यता पुगेका सबै २१ प्रतिशत दलितले जातकै आधारमा रोजगार पाउँदैनन्, जुन मानव अधिकारको अवधारणाविरुद्घ छ। यसरी पुछारमा रहेका वर्ग र समुदाय र अगाडि रहेका वर्ग र समुदायबीचको दूरी घटाउन समावेशी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम जरुरी छ। अन्यथा वर्ग र समुदायबीचको दूरी र द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना छ।
राज्यले आफूलाई समावेशी बनाउने कि ? नेपाली राज्यलाई समावेशी बनाउने हो भने राज्य संरचनामा दलितको पहुँच बढाएर नीतिगत रूपमा यस्ता समस्या सम्बोधनको थालनी गर्न सकिन्छ। राज्य र समाजको पिँधमा रहेका दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाएर यसको स्पष्ट संकेत देखाउन सकिन्थ्यो। विडम्बना, समानुपातिक समावेशितालाई पनि बढी प्रतिनिधित्व भएकै वर्ण र समुदायको पक्षमा लागू गर्ने राज्य सञ्चालकको पुरानो बानी सुध्रिएन। त्यसको उदाहरण प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व लगभग ७ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ। जबकि त्यसलाई १३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका दलितको जनसंख्याको समानुपातिक बनाउन सकिन्छ।
त्यसका लागि नयाँ संविधान पनि फेर्नु पर्दैन, कसैले प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद पनि त्याग्नु पर्दैन। बस् आफ्नो विभेदाकारी मानसिकता मात्रै छोडे पुग्छ। यस्तो एक जातीय प्रभुत्वले दलित र समग्र सीमान्तकृत एवं बहिष्कृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र उनीहरूको आर्थिक विकाससँगै समृद्धिलाई पटक्कै प्रोत्साहित गर्दैन। अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र ‘वाम गठबन्धन’ को नाममा विकास र समृद्धिको नारा दिइरहेका छन्। उनीहरूको एकल वा आलोपालो नेतृत्वले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार सञ्चालन गरेमा नेपाल पनि विकासमार्गमा रेलजस्तै गुड्ने आशा गर्ने अत्यधिक छन्। तर, इतिहासले बताउँछ, राणाशाहीले १ सय ४ वर्ष र पञ्चायती व्यवस्थाले ३० वर्ष स्थिर शासन सञ्चालन गर्दा पनि ‘विकास र समृद्धिकै नारा’ दिएका थिए।
एकल जातीय प्रभुत्व र आफ्नो र आसोपासको विकास-समृद्धिमा मात्रै उनीहरू केन्द्रित भए। सदियौंदेखि संरचनात्मक विभेद गर्दै सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित र सबै सीमान्तकृत जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर राज्य संरचना चलाइन्छ कि चलाइँदैन ? वाम गठबन्धन सरकार र त्यसको विकास-समृद्धिको नारासामु उठेको अहिलेको यक्ष प्रश्न यही हो। यस्ता प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै विकास र समृद्धिको योजनाले हुने र नहुने वर्गबीचको द्वन्द्व झनै बढेर जानेछ। त्यसले देशलाई नै अर्को द्वन्द्वमा पुर्‍याउने छ।
नुवाकोटमा सवा अर्बको आलु उब्जनी